कतार चुनावः लोकतन्त्रको शुरुवात कि नौटंकी मात्र ? « News24 : Premium News Channel
कतार चुनावः लोकतन्त्रको शुरुवात कि नौटंकी मात्र ?
एजेन्सी । कतारमा शनिबार पहिलो पटक राष्ट्रिय चुनाव भएको छ । वास्तवमा, यो सुरा काउन्सिलको चुनाव हो, देशको सल्लाहकार परिषद, जुन देशको पहिलो विधायी चुनावको रूपमा पनि यसलाई लिइएको छ ।
अल जजीराका अनुसार २९ महिलाहरुसहित २९४ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उभिएका छन् । देशका ३० जिल्लामा स्थापित गरिएको मतदान केन्द्रहरुमा भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यद्यपि यस चुनावको बारेमा धेरै प्रश्न उठाइएको छ, तर यो चुनाव आफैमा ऐतिहासिक छ। ४५ सदस्यीय सुरा काउन्सिलका ३० सदस्यहरुका लागि चुनाव हुँदैछ, जबकि १५ सदस्यहरु देशका शासक अमीर शेख तमिम बिन हम्माद अल थानी आफैंले छनौट गर्नेछन्।
सुरा परिषद के हो ?
देशका शासक अल थानीले अक्टोबर २ मा यी ऐतिहासिक चुनावको लागि मतदान मिति तय गरेका थिए । सुरा काउन्सिलसँग देशको सामान्य नीति र बजेट स्वीकृत गर्ने विधायी अधिकार छ, तर रक्षा, सुरक्षा, आर्थिक र लगानीमा आधारित नीति बनाउने कार्यकारी निकायहरुमा कुनै नियन्त्रण छैन ।
यस कारण यो मानिन्छ कि यो परिषदमा सीमित शक्तिहरु छ र देशको शासक सबैभन्दा शक्तिशाली छ । तर अझै विश्लेषकहरु विश्वास गर्छन् कि यो खाडी देश बहराइन, ओमान र कुवेत पछि लोकतन्त्र को लागि पहिलो कदम हो।
बहराइन र ओमानमा समान सल्लाहकार निकायहरु छन्, जबकि कुवेतमा एक पूर्ण निर्वाचित संसद छ।
पेच कहाँ छ ?
यी चुनाव २००३ मा संवैधानिक जनमत संग्रहपछि अनुमति दिइएको थियो, तर आलोचकहरु विश्वास गर्छन् कि मतदान योग्यता धेरै संकीर्ण छ ।
देशमा नगरपालिकाको चुनाव अहिलेसम्म भएको छ र मानिसहरु भोट गर्दै छन् तर राजनीतिक दलहरु प्रतिबन्धित छन्।
वर्तमानमा कतारमा सबै भन्दा विवाद मतदानको बारेमा छ किनकि सबै नागरिकहरुलाई यसमा भोट गर्न सक्दैनन्। यो खाडी देश, संसारको सबैभन्दा ठूलो तरलीकृत प्राकृतिक ग्याँस उत्पादक, विदेशी कामदारहरुको एक ठूलो संख्या छ र देशको जनसंख्या लगभग ३० लाख छ, तर केवल १० प्रतिशत मानिसहरुले अर्थात् तीन लाख नागरिक मात्र मतदानमा सहभागी हुन पाउँछन् ।
देशको चुनावी कानून अन्तर्गत, मूल निवासी र मतदानको लागि नागरिकहरुबीच विभेद गरिएको छ । धेरै मानव अधिकार संगठनहरु र आम नागरिकहरु यसको विरोध गर्दै छन् । यस कानूनको कारण ९० प्रतिशत कतारी नागरिकहरुलाई मतदान गर्न वा चुनावमा उभिन प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
भोट हाल्ने कानून के हो ?
यस वर्ष जुलाईमा अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल थानीद्वारा पारित कानून अनुसार १८ वर्ष भन्दा माथिका नागरिकहरु जो कतारी नागरिक वा नागरिक हुन् जो उनीहरुका पुर्खा कतारमा बसोबास गरेको प्रमाणित गर्न सक्दछन् उनीहरुले मात्र भोट हाल्न सक्छन् । ती मानिसहरुलाई जस्ले उनीहरुका पुर्खाहरु सन् १९३० भन्दा पहिले कतारी क्षेत्रमा बसिरहेका थिए भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्छ । तब मात्र उनीहरु भोट हाल्न पाउँछन् ।
यस समय पछिका ती व्यक्तिहरु, जसले कतारको नागरिकता लिएका छन, उनीहरु नत मतदान गर्न सक्छन् न चुनाव लड्न सक्छन ।
गत महिना, ह्युमन राइट्स वाचका मध्य पूर्वका उप निर्देशक एडम कुगलले भने कि सरकारमा नागरिकहरुको सहभागिताका लागि कतारको प्रयासलाई पत्याउन सकिन्छ तर धेरै कतारी नागरिकहरुलाई मतदान गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरेर कलंकित गरिएको घटनालाई भने विर्सन मिल्दैन ।
उनले भने कि नयाँ कानूनले कतारका जनताहरुलाई विभाजित गरिएको छ कि उनीहरु सबै बराबर छैनन्।
त्यहाँ एक विशेष जनजाति क्रोधित पनि छन् । यस बाहेक, निर्वाचन कानूनको एक अनुच्छेदको कारण देशको आदिवासी समुदाय पनि धेरै क्रोधित छन्।
यस कानून अनुसार कुनै पनि व्यक्ति जो १९७१ मा कतारको गठन पछि लगातार देशमा छैनन, उनीहरुले पनि चुनावमा भाग लिन सक्दैनन्। यो मानिन्छ कि यो कानून विशेष गरी घुमन्ते कतार जनजाति अल–मुरा को लागि ल्याइएको हो।
ह्युमन राइट्स वाचका अनुसार अगस्टमा यसको विरोधमा प्रदर्शन भएको थियो, जसमा अल मुरारा जनजातिका अधिकांश मानिसहरु संलग्न थिए र कम्तीमा १५ जना पक्राउ परेका थिए।
समाचार एजेन्सी रोयटर्स, कतारी स्रोतहरुलाई उद्धृत गर्दै लेख्छन् कि दुई जना अझै हिंसा र घृणायुक्त भाषणको लागि हिरासतमा छन्।
अल मुरारा जनजाति र कतारको शाही परिवारको बीच सम्बन्ध सधैं गरीब भएको छ। वर्ष २०१७ मा, जब कतार र साउदी अरेबियाको बीच तनाव बढ्यो, यस जनजातिको अधिकांश सदस्यहरु साउदी अरबको पक्ष लिए।
अर्कोतर्फ, अमवाज डट मिडियाका अनुसार, मुराह समुदायका केहि मानिसहरु कथित रूपमा १९९६को कूमा संलग्न थिए। उनीहरु हटाइएका अमीर शेख खलीफा बिन हम्मादलाई सिंहासनमा फिर्ता राख्न चाहन्थे। तर, मिडिया रिपोर्टहरुमा यी दाबीहरु खारेज गरिएका छन्।
चुनावी कानूनको सम्बन्धमा कतारका विदेश मन्त्रीले भनेका छन कि चुनावी प्रक्रियाको सम्बन्धमा जुनसुकै समीक्षा गर्नु पर्ने छ, अर्को सुरा काउन्सिलले गर्नेछ, यो एक स्पष्ट प्रक्रिया हो।
यो परिवर्तन कसरी ?
कतार विश्वको सबैभन्दा ठूलो ग्यास उत्पादक र अमेरिकाको सहयोगी हो। उनीसंग विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति अर्थात् ५९ हजार डलर छ। यस कारणले पनि त्यहाँ सामाजिक र राजनैतिक अशान्तिको सम्भावना कम छ।
चुनावी प्रक्रियामा अरब गल्फ स्टेट्स इन्स्टिच्युटकी क्रिस्टीन स्मिथ दीवानले रोयटर्सलाई भने कि कतारको नेतृत्व सतर्कताका साथ अगाडि बढिरहेको छ, विभिन्न तरिकामा सहभागितामा प्रतिबन्ध लगाएको छ र राजनीतिक बहस र यसको नतिजामा महत्वपूर्ण नियन्त्रण राखेको छ।
उनी भन्छिन् कि लोकप्रिय राजनीति यहाँ अप्रत्याशित छ, तर उनी विश्वास गर्छन् कि समय बित्दै जाँदा, राजनीतिक प्लेटफर्मको विकाससंगै, कतारका जनताहरु आफ्नो भूमिका र अधिकारको बारेमा अधिक सजग हुनेछन्।
विश्वकप फुटबल र कतारको लोकतान्त्रिक छवि
के कतार अर्को बर्ष फुटबल विश्वकप हुनु भन्दा पहिले आफ्नो छविलाई अधिक लोकतान्त्रिक देखाउनको लागि जोड दिइरहेको छ ?
यस सम्बन्धमा युरोपियन काउन्सिल फर फरेन रिलेशन्सको रिसर्च फेलो चिनसिया बियान्को भन्छिन् कि उनलाई लाग्दैन कि कतारको धनवानहरुले यो सबै पीआर स्टन्टको रुपमा काम गरिरहेका छन् ।
उनले जर्मन प्रसारक डीडब्ल्यूलाई भने कि कतारको नेतृत्व २००९ पछि सुरा चुनावको बारेमा कुरा गरिरहेको थियो, तर उनीहरु यसलाई लागू गर्नका लागि अहिलेसम्म पर्खिरहेका छन्, यद्यपि उनीहरुसँग पीआर स्टन्ट गर्ने राम्रो कारण थियो। कतार संकटको बेला इस्लामिक समूहहरुको उनको समर्थनको लागि व्यापक नकारात्मक मिडिया कभरेज थियो।